Acyclovir amin'ny fahantrana
Ny dokotera Acyclovir dia aseho amin'ny fitsaboana ny karazana herpes simplex rehetra, ary koa ny fitsaboana ny herpes zoster. Ary na dia mampitombo ny fahatsapana ho an'ny zava-mahadomelina aza ny fampiasana ny fifindran'ny aretina Acyclovir, ny fampiasana Acyclovir ho an'ny vehivavy bevohoka dia tsy atao afa-tsy amin'ny tranga manokana.
Inona ny virosy herpes?
Ny viriosy simplex dia ampitaina amin'ny fifandraisana amin'ny marary na ny mpanentana azy. Fomba handraisan'ny viriosy:
Contact . Nalefa rehefa nifandray tamin'ny zavatra voatanisa.
Sexual . Ao amin'ny fanamarinana ara-pananahana na ny fihetsika dia manindrona ny virosin'ny heritaona .
Oral . Ny tsindrona dia miteraka aretina.
Transplacental . Ny viriosy dia mivadika amin'ny utero avy amin'ny reniny mankany amin'ny foetus.
Intranatally . Ny fanafody dia mitranga rehefa mifandray amin'ny taratasy mivalona amin'ny reny marary mandritra ny fiterahana ilay zaza.
Mihetsiketsika amin'ny alalan'ny mitefaka moka sy hoditra simba izy io. Miaraka amin'ny lasibatry ny lymph dia miditra ao anaty fantsom-boasary, ra, ary taova anatiny, nesorina tao anaty urine. Saingy ny tsimok'aretin'ny viriosy dia aorian'izay dia mihitsoka avy amin'ny vatana izy, saingy ao anatin'ny fery nerveuse eo akaikin'ny vavahady dia mitoetra ho tohatra (tsy misy) ho an'ny fiainana ary tafiditra ao anatin'ny fepetran'ny tontolo iainana. Ny viriosy dia miseho ho toy ny akorandriaka feno fangirifiriana sy mangidy ao anaty endriky ny ranomandry. Ny fako dia miorina eo amin'ny sisin'ny hoditra sy ny moka. Ny viriosy dia mety ho marimaritra iraisana.
Herpes sy ny bevohoka: mety hitera-doza
Herpes dia iray amin'ireo viriosy izay mety ho antony fototr'aretina, fahafatesana fetala ary fiterahana fohy, fihenan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny zaza , ny fahaterahana vao haingana. Noho izany, aorian 'ny toe-javatra mitovitovy amin' izany, talohan 'ny fitondrana vohoka vaovao sy mandritra ny fitondrana vohoka, dia natao ny fanadihadiana ny fisian'ny virosy amin'ny vehivavy.
Ny fampiasana acyclovir amin'ny fitondrana vohoka ho an'ny fitsaboana
Ny Acyclovir dia miditra amin'ny sakana miaro ny tosi-drà ary miteraka fiantraikany ratsy amin'ny foetus, noho izany dia tsy ampiasaina amin'ny trimestre voalohany amin'ny maha-bevohoka azy izany. Ny akcyclovir ao amin'ny fitondrana vohoka (tabilao sy lyophilate ho fanomanana vahaolana) dia mifanohitra amin'ny fitsaboana ankapobeny, saingy indraindray ao amin'ny telo-polo fahatelon'ny fitondrana vohoka dia ampiasaina ny zava-mahadomelina (toy ny menaka na crème).
Acyclovir (fanafody) mandritra ny fitondrana vohoka - fampianarana
Ny alika Acyclovir dia navotsotra tamin'ny endrika 5% ho an'ny fampiasana ivelany ary 3% ody fanafody. Ho fitsaboana ny herpes amin'ny endriky ny miteo amin'ny fiterahana, tsara kokoa ny mampiasa menaka 3 metatra atody. Raha voan'ny aretim-pivalanana ny tazomoka na ny fitsaboana ny virosin'ny herpes amin'ny toeram-pitsaboana hita ao amin'ny laboratoara dia 35 herinandro ny herinandro dia azo omena ny fitsaboana ny herpes amin'ny alika Acyclovir mba hisorohana ny aretina amin'ny zaza tsy ampy taona. Alohan'ny hampiharana ny menaka fanosorana dia tokony hosasana amin'ny rano mafana ary maina miaraka amin'ny lamba. Ny dipoavatra dia ampiharina amin'ny hoditra simika sy ny molekiolan'ny tsiranoka isaky ny adiny 4 miaraka amin'ny loko matevina. Ny fitsaboana dia afaka maharitra 5 ka hatramin'ny 10 andro.
Acyclovir (crème) mandritra ny fitondrana vohoka - fampianarana
Ny Cream Acyclovir dia navotsotra ho 5% mofomamin'ny lanjany 100 grama. Fa ny fitsaboana ny hepatita, dia tsy mety ny crème. Ampiasaina mba hanehoana ny karazana herpes simplex hafa (eo amin'ny molotra, eo amin'ny elatry ny orona). Ny crème dia tsy miditra ao amin'ny reniranon'ny reny ary noho izany dia ampiasaina amin'ny fomba ofisialy mandritra ny fitondrana vohoka, ny fomba fampiharana dia mitovy amin'ny an'ny Acyclovir.
Raha tsy mahomby ny fitsaboana amin'ny Acyclovir, ary mbola manasitrana ny virosin'ny vehivavy bevohoka ny viriosy, dia ilaina ny misoroka ny aretin'ny zaza tsy ampy taona amin'ny fiterahana. Ho an'ity, ny fizarana dia amin'ny fizarana caesarean.
Embryo 6 herinandro
Happy Mom - Torohevitra mandritra ny fitomboan'ny zaza
Kilaoty mandritra ny fitondrana vohoka - 1 term
Cystitis tamin'ny bevohoka
Famantarana ny fitondrana vohoka amin'ny 2 volana
Ny fahantrana sy ny VIH
Ankizivavy mafy ao amin'ny fitondrana vohoka
Herinandro 5 isaky ny fitondrana vohoka - habaka fetra
Magnesia amin'ny fitondrana vohoka
Afaka mahazo labiera tsy mamokatra ve ny vehivavy bevohoka?
Lalao ho an'ny fampandrosoana ny feon'ny fononteny
Manipika fahavaratra 2015
Sarim-piraketana an-tsoratra amin'ny tananao
Mihena ny Normox
Famantarana ny 14 Septambra
Computer tomographie amin'ny nify
Ny Tilikambo Fiambenana (Tirana)
Oh, tanora: zana-drahona malaza 30 nandritra ny fahatanorany
Down jacket Savage
Analysis for enterobiasis
Rhododendrons - fambolena sy fiahiana
Fashion clutch 2016
Ahoana ny fomba hametrahana kilasy voalohany?
Ny mpanoratra ny boky "Ilay Rose" dia maty tamin'ny faha-85 taonany
Girl-doll Anastasia Shonde